Jọshụa 19 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
19 Nza nke abụọ+ wee daara Simiọn, maka ebo ụmụ Simiọn+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ. Ihe nketa ha wee dịrị n’etiti ihe nketa ụmụ Juda.+ 2 Ihe nketa ha wee bụrụ Bia-shiba+ na Shiba na Moleda,+ 3 na Heza-shual+ na Bela na Izem,+ 4 na Eltolad+ na Bitọl na Họma, 5 na Ziklag+ na Bet-makabọt na Heza-susa,+ 6 na Bet-lebeọt+ na Sharuhen; obodo iri na atọ na ógbè ha niile. 7 Eyin,+ Rimọn+ na Ita na Eshan;+ obodo anọ na ógbè ha niile, 8 tinyere ógbè niile ndị dị gburugburu obodo ndị a ruo Belat-bia,+ Rema+ nke ndịda. Ọ bụ nke a bụ ihe nketa ebo ụmụ Simiọn n’ezinụlọ n’ezinụlọ. 9 Ọ bụ n’òkè e kenyere ụmụ Juda ka e si kepụta ihe nketa e nyere ụmụ Simiọn, n’ihi na òkè ụmụ Juda karịrị ha.+ N’ihi ya, ụmụ Simiọn nwetara ala n’etiti ihe nketa ụmụ Juda.+ 10 Nza nke atọ+ daara ụmụ Zebulọn+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ, ókè nke ihe nketa ha wee ruo Serid. 11 Ókè nke ala ha gbagoro n’ebe ọdịda anyanwụ ruo Mariel, ruokwa Dabeshet, ruo n’iyi ndagwurugwu nke dị n’ihu Jọkniam.+ 12 O sikwa na Serid n’ebe ọwụwa anyanwụ gaa azụ ruo n’ókè Kislọt-tebọ, ruokwa Daberat+ ma gbagoo Jefaya. 13 O sikwa n’ebe ahụ gafere gawa n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo Gat-hifa,+ ruo Et-kezin, ruokwa Rimọn, a kpakwara ókè ya ruo Nia. 14 Ókè ya gara ya nkọnkọ n’ebe ugwu ruo Hanatọn, ebe o jedebere bụ ndagwurugwu Ịfta-el, 15 na Katat na Nahalal na Shimrọn+ na Aịdala na Betlehem;+ obodo iri na abụọ na ógbè ha niile. 16 Ọ bụ nke a bụ ihe nketa+ ụmụ Zebulọn n’ezinụlọ n’ezinụlọ.+ Ọ bụ ndị a bụ obodo ha na ógbè ha niile. 17 Ọ bụ Ịsaka+ ka nza nke anọ daara, maka ụmụ Ịsaka n’ezinụlọ n’ezinụlọ. 18 Ókè nke ala ha wee ruo Jezril+ na Kesọlọt na Shunem,+ 19 na Hafarem na Shayọn na Anaherat, 20 na Rabit na Kishiọn na Ibez, 21 na Rimet na En-ganim+ na En-hada na Bet-pazez. 22 Ókè ya ruru Tebọ+ nakwa Shahazuma na Bet-shimesh, ebe ókè nke ala ha jedebere bụ na Jọdan; obodo iri na isii na ógbè ha niile. 23 Ọ bụ nke a bụ ihe nketa nke ebo ụmụ Ịsaka n’ezinụlọ n’ezinụlọ,+ obodo ha na ógbè ha niile. 24 Nza nke ise+ wee daara ebo ụmụ Asha+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ. 25 Ókè nke ala ha wee bụrụ Helkat+ na Helaị na Biten na Akshaf,+ 26 na Alamelek na Emad na Maịshal.+ O rukwara Kamel+ n’ebe ọdịda anyanwụ, ruokwa Shaịhọ-libnat, 27 ọ gara azụ n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo Bet-degọn, ruokwa Zebulọn+ nakwa ndagwurugwu Ịfta-el n’ebe ugwu, ruo Bet-imek na Neyel, o rukwara Kebul n’aka ekpe, 28 ruokwa Ibrọn na Rihọb na Hamọn na Kena ruo Saịdọn+ nke nwere ụba mmadu. 29 Ókè nke ala ha wee laghachi azụ ruo Rema, ruokwa n’obodo Taya+ e wusiri ike. Ókè nke ala ha laghachikwara ruo Hosa, ebe o jedebere bụ n’oké osimiri nke dị n’ógbè Akzib,+ 30 tinyere Ọma na Efek+ na Rihọb;+ obodo iri abụọ na abụọ na ógbè ha niile. 31 Ọ bụ nke a bụ ihe nketa nke ebo ụmụ Asha n’ezinụlọ n’ezinụlọ.+ Ndị a bụ obodo ha na ógbè ha niile. 32 Ọ bụ ụmụ Naftalaị+ ka nza nke isii+ daara, maka ụmụ Naftalaị n’ezinụlọ n’ezinụlọ. 33 Ókè nke ala ha wee malite na Hilef, bido ná nnukwu osisi dị na Zeananim,+ na Adami-nikeb na Jabniel ruo Lakọm; ebe o jedebere bụ na Jọdan. 34 Ókè ya wee laghachi azụ n’ebe ọdịda anyanwụ ruo Aznọt-tebọ wee si n’ebe ahụ ruo Họkọk, ruokwa Zebulọn+ n’ebe ndịda, ruo Asha+ n’ebe ọdịda anyanwụ, ruokwa Juda+ n’akụkụ Jọdan n’ebe ọwụwa anyanwụ. 35 Obodo ya ndị e wusiri ike bụ Zidim, Zee na Hamat,+ Rakat na Kineret,+ 36 na Adama na Rema na Hezọ,+ 37 na Kidesh+ na Edriaị na En-hezọ, 38 na Yaịrọn na Migdal-el, Horem na Bet-enat na Bet-shimesh;+ obodo iri na itoolu na ógbè ha niile. 39 Ọ bụ nke a bụ ihe nketa+ ebo ụmụ Naftalaị n’ezinụlọ n’ezinụlọ,+ obodo ha na ógbè ha niile. 40 Ọ bụ ebo ụmụ Dan+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ ka nza nke asaa daara.+ 41 Ókè nke ihe nketa ha wee bụrụ Zora+ na Eshtaọl na Iye-shimesh, 42 na Shealabin+ na Aịjalọn+ na Ịtla, 43 na Ilọn na Timna+ na Ekrọn,+ 44 na Elteke na Gibetọn+ na Belat,+ 45 na Jihọd na Bene-birak na Gat-rimọn,+ 46 na Me-jakọn na Rakọn, ókè ya dịkwa n’ihu Jọpa.+ 47 Ókèala ụmụ Dan abaghị ha.+ Ụmụ Dan wee gbagoo buso Lishem agha,+ weghara ya ma jiri ihu mma agha bibie ya. Ha wee nweta ya ma biri na ya. Ha wee gụọ Lishem Dan, bụ́ aha Dan nna nna ha.+ 48 Ọ bụ nke a bụ ihe nketa ebo ụmụ Dan n’ezinụlọ n’ezinụlọ. Ọ bụ ndị a bụ obodo ha na ógbè ha niile. 49 Ha si otú a kechaa ala ahụ ka ọ bụrụ ihe onwunwe dị ka ókèala ya niile si dị. Ụmụ Izrel wee nye Jọshụa nwa Nọn ihe nketa n’etiti ha. 50 Dị ka Jehova nyere n’iwu, ha nyere ya obodo ọ rịọrọ ha,+ ya bụ, Timnat-sira,+ n’ógbè Ifrem bụ́ ugwu ugwu; o wee malite iwu obodo ahụ ma biri na ya. 51 Ọ bụ ndị a bụ ihe nketa Elieza onye nchụàjà na Jọshụa nwa Nọn na ndị isi nke ndị bụ́ nna n’ebo dị iche iche nke ụmụ Izrel kesara+ dị ka ihe onwunwe site n’ife nza na Shaịlo+ n’ihu Jehova, n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute.+ Ha wee kwụsị ike ala ahụ.